China akpụzi eme Manufacturer na Supplier | Meste
Akpụzi Ndinam (Die eme) bụ usoro nke n'ichepụta ihe ndị ahụ dịka ịbịaru ihe eji akpụzi, na-eji ihe eji arụ ọrụ, ịkpụ ọkụ ọkụ, ọgwụgwọ elu na ọgwụgwọ okpomọkụ, na n'ikpeazụ na-achịkọta akụkụ niile n'ime ebu dị ka eserese ahụ.
Ebu Ndinam & n'ichepụta bụ ihe dị ezigbo mkpa ụlọ ọrụ na oge a n'ichepụta ụlọ ọrụ. Ọ na-enye akụrụngwa usoro dị mkpa maka nnukwu ọrụ, arụmọrụ dị elu yana nrụpụta ụlọ ọrụ dị elu.
Gịnị bụ ebu?
Ebu (ebu, nwụọ) ka a maara dị ka "nne nke ụlọ ọrụ", nke bụ usoro usoro ihe dị mkpa iji nweta oke nkenke, arụmọrụ dị elu na nnukwu mmepụta ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke oge a. Na mmepụta nke ụlọ ọrụ ebu, a na-eji ebu na ngwaọrụ dị iche iche iji nweta ngwaahịa ndị achọrọ site na ogwu ogbugba, ịkpụzi ịkpụzi, extrusion, nkedo ebu ma ọ bụ ịkpụzi, ịze agba, zọọ na ụzọ ndị ọzọ. Na nkenke, ebu bụ ngwa eji akpụ ihe. Ngwá ọrụ a nwere akụkụ dị iche iche, na ihe ọkpụkpọ dị iche iche nwere akụkụ dị iche iche. Ọ kachasị na-achọpụta nhazi nke ọdịdị nke ihe ahụ site na ịgbanwe ọnọdụ anụ ahụ nke ihe na-akpụ. A maara ya dị ka "nne nke ụlọ ọrụ".
Gịnị bụ ebu n'ichepụta?
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebu nile ji ọla mee, 90% n’ime ha bụkwa ígwè.
N'okpuru ọrụ nke mpụga, mpempe akwụkwọ nchara na-aghọ ngwa ọrụ maka imepụta ya na oke na nha. Ọ na ọtụtụ-eji zọ, ebu ibe ya bụrụ, oyi isiokwu, extrusion, uzu metallurgy akụkụ ịpị, mgbali mgbatị, nakwa dị ka injinịa plastik, roba, ceramik na ndị ọzọ na ngwaahịa nke mkpakọ ma ọ bụ injection ịkpụzi. Eke ahụ nwere ụdị contour ma ọ bụ ọdịdị oghere dị n'ime, enwere ike ịkewa oghere dị ka ọdịdị contour (blanking) site na itinye akụkụ contour na nsọtụ. Enwere ike iji ọdịdị nke oghere dị n'ime ya nweta ụdị akụkụ atọ nke billet ahụ. Ebu n'ozuzu gụnyere akụkụ abụọ: ebu ibugharị na ofu ebu (ma ọ bụ Punch na concave ebu), nke nwere ike iche na jikọtara. Mgbe e kewara akụkụ ndị ahụ, a na-agbanye oghere ndị ahụ n’ime oghere ebu ha iji mepụta mgbe ha mechiri. Ebu bụ kpọmkwem ngwá ọrụ nwere mgbagwoju udi ma na-amị na bulging ike nke billet. Ọ nwere nnukwu ihe ọ chọrọ na ike nhazi, ike isi ike, isi ike, ịdị ike ihu na nhazi. Ọganihu mmepe nke mmepụta ebu bụ otu n'ime akara dị mkpa nke ọkwa nrụpụta igwe.
The usoro nke ebu n'ichepụta na-agụnye: ebu imewe, ebu nhazi, ebu nnyocha na ule shot, ebu mgbanwe na mmezi, na ebu mmezi.
A na-ahụkarị nhazi ihe eji akpụzi akpụzi site na ibe ya, ịcha ya, ọgwụgwọ okpomọkụ yana nzukọ ya na usoro ndị ọzọ. Iji hụ na n'ichepụta àgwà nke ebu na belata mmepụta na-eri, na ihe onwunwe kwesịrị inwe ezi malleability, ịcha machinability, hardenability na grindability, na kwesịrị inwe obere ọxịdashọn, decarbonization uche na imenyụ deformation cracking ọchịchọ. Cha na-ewe 70% nke oke ọrụ nke nhazi ebu. Nzọ kachasị dị oke mkpa bụ ịnweta oghere nke na-ezute ihe achọrọ nke ọdịdị, akụkụ ziri ezi na ogo elu, yana usoro niile.
A na-akpọgharị oghere nchara maka ịme ihe ahụ ma mepụta ya na osisi nchara, ụlọ ọrụ na-akpụzi nwere ike ịhọrọ ịzụta. Ebu mee bụ ime ka ndị a ígwè blanks n'ime Ebu na ike na-emepụta na ngwaahịa na uka mmepụta. Mmepụta nke ebu na-agụnye ịkpụzi akpụzi, ịkpụzi na mkpokọta nke isi ebu na isi ebu.
1. Ebu ebu mezuru site ọkachamara injinia. Ebu imewe bụ ụkpụrụ na ndabere nke dum ebu mmepụta. Dị ka ihe ndị achọrọ si dị n'ichepụta ngwaahịa na ịdị elu nke ezi akụkụ, oge itinye akwụkwọ na nrụpụta a na-atụ anya ya, yana nhazi nke ịkpụzi igwe na-arụ ọrụ, injinia ga-ahọrọ ezi igwe maka akụkụ ọ bụla nke ebu ahụ ma chọpụta nhazi na usoro nke ebu ahụ. Ihe amamihe dị na ya na-ekpebi nrụpụta nrụpụta, ọnụ ahịa, ndụ ọrụ, nrụpụta yana ogo ngwaahịa nke ebu.
Ebu bụ ụdị ihe dị oke ọnụ. N'ime imewe ahụ, ndị injinia anyị na-eji sọftụwia iji nyochaa ma kọwaa nkesa akụkụ ahụ, ụzọ na-asọpụta, ebe ogwu na ọbụna usoro nke akụkụ ahụ.
2. Nhazi nke ebu. A na-edozi mpempe akwụkwọ site na igwe akụrụngwa dịka atụmatụ nke injinia na usoro usoro. N'ozuzu, ngwaọrụ igwe ihe na akụrụngwa ejiri mee ihe bụ CNC, EDM, WEDM, lathe, grinder, igwe na-egbu egbu, wdg. Ngwaọrụ igwe na-arụ ọrụ nke ọma na nke nwere ike imeziwanye ihe nkedo ebu, belata usoro mmepụta ma belata ọnụ ahịa. Ofdị dị iche iche dị iche iche na-eji ngwakọta dị iche iche nke ngwaọrụ igwe: ịkpụzi ọgwụ na ịkpụzi ihe na-ejikarị CNC, EDM na WEDM. Ebu zọ na ebu extrusion na-ejikarị CNC na WEDM
3. Nkedo akpụzi. Nzukọ nke ebu na-adabere na ndị ọkachamara. Ọ na-agụnye isi ọnwụ, ngọngọ slide, akwụkwọ ntuziaka, usoro nchụpụ, nha n'etiti anwụ na moto, ndị na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ, yana akụkụ a na-enweghị ike ịkpụ, yana nzukọ ikpeazụ. The elu izi ezi nke machining, na-erughị na-arụ ọrụ nke na-anwụ nzukọ, na mkpumkpu mmepụta okirikiri na ala na-eri. Mgbe emechara nzukọ nke ọnwụ, ọ dị mkpa ịnwale, nyochaa, debug ma melite ọnwu ahụ ruo mgbe ọ ga - ewepụta ngwaahịa ruru eru na ọnụọgụ ndị ọzọ.
Ahụkarị ebu Ndinam usoro
EDM-Eletriki Ihapu Machining
WEDM-waya electrode ịcha
Dabara adaba na ikpokọta ebu
Mestech ụlọ ọrụ na-tumadi aku plastic ebu n'ichepụta na ngwaahịa ọgwụ, nakwa dị ka ngwaike Ebu (metal anwụ-mgbatị anwụ, zọ anwụ) n'ichepụta na metal akụkụ mmepụta.
Nke gara aga: Ebu imewe
Osote: Esi chepụta akụkụ plastik